Virgin Bursary_Zulu - Amandla.mobi isiZulu
Asilwe nomfundaze ophoqa ukuhlolwa kwezintombi
Izinhlangano zabafundi eMzansi wonkana zifuna imfundo ephusile yamahhala. Yize kunjalo, njengamanje, abantu besifazane bazithola bephoqwa ukuthi bazilawule kanjani ukuze bezokwazi ukuthi bathole imfundo ephakeme. Umkhandlu woThukela umise umfundaze obizwa nge’Maidens Bursary Scheme’, ozuzwa ngokuthi abesifazane bahlolelwe ubuntombi. Uma betholwa beyizintombi, bazodinga ukuthi bahlolwe njalo ngamaholide ukuze kuqiniseke ukuthi basazithibile .
Ukuhlolwa kwezintombi kungumkhuba ohlukumezayo futhi ocwasa ngokobulili, okufanele ukuthi awunamthelela ekutheni abantu besifazane bathole imifundaze. Faka igama lakho, useke amalungelo abesifazane. Asikazwi ukuvumela ukungena kwabesifazane emfundweni ephakeme kube ngenxa yemikhuba ehlukumezayo, imikhuba edicilela phansi isithunzi sabantu besifazane, kanye nemikhuba ephuca abesifazane amandla okuzikhethela ukuthi benzeni ngemizimba yabo.
Ngokubambisana, singakwazi ukuqikelela ukuthi izimali zomphakathi azisetshenziselwa ekucwaseni abesifazane noma ekugqugquzeleni imikhuba ecindezela abesifazane kanye nokungalingani emphakathini esiphila kuwo.
Meya yoThukela District Municipality, Dudu Mazibuko,
Thina, abasayinde lapha, sifuna ukuthi uqede i-‘Maiden Bursary Award’, ephoqa abantu besifazane ukuthi bahlolwe ubuntombi ukuze bahlomule. Lo mkhuba wokuhlola izintombi uhlukumeza amalungelo abesifazane, luphinde luphuce abesifazane amandla okuzikhethela ngokwenzeka emizimbeni yabo. Uma lo mfundaze ubuhlose ukuthi uthuthukise abesifazane, lokhu makwenzeke ngendlela ehlonipha iphinde ivikele isithunzi sabo.
Abesifazane baphoqwa uMkhandlu woThukela ukuthi bahlolele ubuntombi ukuze bathole imifundaze. Funa ukuthi iMeya iqede lezi zinhlelo.